ANKOFAFA : Tovovavy kely marary saina voaolana tao amin’ny renivohitr’i Fiaranantsoa
Tovovavikely iray mbola tsy ampy taona akory sady manana fahasembanana ara-tsaina no niharan’ny fanararaotana ara-nofo. 21 décembre 2016
Tao Ankofafa, eo an-drenivohitr’i Fiaranantsoa no nisehoan’ity habibiana ity, ny faran’ny herinandro lasa teo iny.
Raha ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana, dia tovolahy iray manodidina ny 26 taona, izay mpiray tanàna aminy ihany no nahavonona ny loza. Nanararaotra ny fahasembanana mahazo azy ity farany.
Fantatra fa rehefa tsy tao an-trano ny renin’ilay zaza fa lasa nandeha nivoaka dia teo no nandady moramora niditra tao an-trano ilay tovolahy. Mody nampiresahany ilay zazavavy ary nanamparany ny filàn-dratsiny amin’izay nony avy eo. Araka ny vaovao voaray dia tonga tampoka ilay reniny ka mbola teo am-panaovana ny asa ratsiny tanteraka ilay tovolahy no tonga ny reniny. Naratra mafy ilay tovovavikely, feno ra ny fandriana iray manontolo noho ny herisetra nihatra taminy. Nikoropaka ilay reniny, niantso vonjy mafy tamin’ny mpiara-monina. Tsy afa-nanda fa teo noho eo ihany dia voasambotra ilay tovolahy nahavon-doza, ary efa naiditra am-ponja taorian’ny fakana am-bavany natao azy. Tonga maro nitondra fanampiana tamin’ny fitsaboana an’ilay zaza ireo olom-panjakana maro tao Fianarantsoa.
2016-12-22 13:07:11 par
efa akaiky ny fara andro dia miseho daholo ny faharatsian’ny olona rehetra e !